बिहुँकोटमा सञ्चालित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरमा अधिकांश महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या ! – ebaglung.com
बिहुँकोटमा सञ्चालित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरमा अधिकांश महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या !
२०७४ फाल्गुन ७, सोमबार १९:११	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
रबिना बोहरा, बागलुङ २०७४ फागुन ७ । काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर–६ बिहुंकोटमा सञ्चालन गरिएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा अधिकांश महिलाहरुमा पाठेघरको समस्या देखिएको छ । ग्रामिण भेगहरुमा बिशेषगरी महिलाहरुले आफुमा रहेका समस्यालाई कुन्ठित गरि राख्ने भएकाले समस्या पनि धेरै देखिएको हो । सहज रुपमा उपचार पाउन नसकेकाहरुलाई लक्षित गरी सन्चालित शिविरमा बढी महिलाको पाठेघर खस्ने, सेतोपानी बग्ने लगायतका समस्या देखिएको महिला तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा. लक्ष्मी गौतमले बताईन् ।
काठेखोला गाउंपालिका–६ को आयोजना र धौलागिरि सञ्जिवनी स्वास्थ्य सहकारीद्वारा सञ्चालित निलगिरि अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको निशुल्क शिविरमा महिला तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा. गौतम, धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका सर्जन निरञ्जन अर्याल लगायत १५ जनाको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । शिविरमा ३ सय भन्दा बढिले सेवा लिइएको जानकारी गराइएको छ ।
बिहुँकोटकी मनरुपा कंडेलले बिगतमा यस्ता शिविर नभएको भन्दै अहिले जनप्रतिनिधिहरुले महिलाहरुका बारेमा सोच्दा खुशी लागेको बताईन् । घरको कामकाजका कारण स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिन नपाएको भन्दै गाउँमा नै भएको शिविरले आफुहरुलाई सहज भएको उनको भनाई थियो ।
अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई पाठेघर खस्ने, सेतोपानी बग्ने, महिनावारी गडबडी हुने, महिनावारीको समयमा बढी पेट दुख्ने लगायतका समस्या बढी देखा परेको हुनाले यसलाई उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलाई प्रथामिकता दिएको बताएका छन् । शिविरमा २ जना महिलाहरुको पाठेघरको निशुल्क अपरेशन गरिने जानकारी दिईएको छ ।
काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष युक्तप्रसाद कंडेलले महिलाहरु बढी घरको काममा व्यस्त हुने भएकाले स्वास्थ्यमा ध्यान नदिदा विभिन्न समस्या देखा परेको बताए । शिविरमा गाउंपालिकाका प्रमुख अमर थापाले ग्रामिण भेगमा रहेका महिलाहरुको स्वास्थ्य सुधारका लागि विभिन्न योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा धौलागिरि सञ्जिवनी स्वास्थ्य सहकारीका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्की, डा. गौतम लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अस्पतालका सञ्चालक थानेश्वर सुवेदीले कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रम वडा अध्यक्ष कंडेलको अध्यक्षता र वडा सचिव मनोज कार्कीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
बागलुङमा सहकारी शिक्षाका लागि ४ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सुरु
पाण्डबखानीमा आयोडिन नुन सम्बन्धि १ दिने जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न !